Kismaayo News » Xaflad lagu daahfurayay taleefishinka Jubaland oo lagu qabtay Kismaayo :- Sawirro
Xaflad lagu daahfurayay taleefishinka Jubaland oo lagu qabtay Kismaayo :- Sawirro
Kn: Xaflad balaaran oo ay ka qeybgaleen mas’uuliyiinta dowladda Jubaland iyo kuwa dowladda federaalka ayaa lagu qabtay magalaada Kismaayo, taasi oo lagu daahfurayay taleefishinka cusub ee Jubaland oo dhawaan hawada soo galay.
Madaxweyne ku xigeenka Jubaland Suldaan Cabdiqaadir Lugadheere ayaa shaaciyey in si rasmi ah uu u furanyahay Taleefishinka, islamarkaasina waxa uu amaanay shaqaalaha iyo maamulka TVGa.
“Waa horumar weyn oo usoo hoydey dowladda Jubaland, waxaanan rajaynayaa in uu noqdo aallad gudata waajibkii loo asaasay” ayuu yiri madaxweyne ku xigeenka.
Waxaa kale oo ka hadlay madasha guddoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka mudane Aadan Khaliif, wasiirka arrimaha bulshada Macalin Maxamed iyo waliba Jeneraal Saxardiid.
Agaasimaha guud ee wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta dowladda federaalka Axmed Xaaji Cabdi oo munaasabadda ka hadlay , kuna hadlay magaca dowladda federaalka ayaa sheegey in warbaahinta ay ahmiyad badan ugu fadhido bulshada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan .
Agaasimaha guud ee taleefishinka Jubaland Cabdinaasir Axmed Sheekh Bashiir (Saxansoxo) oo ka hadlay munaasabadda ayaa shacabka ugu bishaareeyey in taleefishinka uu ka haqabtiri doono warar xaqiiqo ah iyo barnaamijyo tayo leh.
“Saxaafadda waxa ay leedahay sedex ujeeddo oo kala ah wargalin, waxbaris iyo madadaalo, waxaanan idiin balanqaadeynaa in sedexdaba aan kasoo dhalaali doono haddii uu alle idmo” ayuu yiri agaasimaha taleefishinka.
Taleefishinka Jubaland oo muddo bil ku dhow si tijaabo ah hawada ugu jirey ayaa jadwalkiisa shaqo bilaabay 2-da oktoobar oo shalay jimcihii ahayd.